DONGGUAN JINRONG aluminum PRODUCTS CO., LTD. chinhu nyanzvi mugadziri kushandisa kugadzirisa aruminiyamu chiwanikwa Profiles uye rutsigiro Profile of akatungamirira chubhu iri China.We Set chakuvhuvhu tsvakurudza uye kukura, magadzirirwo, aruminiyamu zvakadzama kubudiswa uye pamusoro kurapwa mune rimwe, tine yakabatana waishandiswa chikwata dzakakwirira zvibereko uye yakakwirira kudiwa kugadzirwa mutsetse, zvigadzirwa edu ose akapfuura ISO dzakawanda unhu hurongwa advertising.
Kuburikidza kuramba kuvandudza yedu hwokugadzira uye utsanzi ability.We vari kutungamirira chinzvimbo pakadzika kubudiswa aruminiyamu zvinogadzirwa bhizimisi uye zvakatipoteredza noushamwari pamusoro kurapwa technology.Our aruminiyamu zvigadzirwa vave nevakawanda kushandiswa muminda siyana mudzimba kumusika uye aivigirwa kuSingapore, Malaysia, Thailand, Germany nedzimwe nyika uye kumatunhu.
"Quality wokutanga, mukurumbira pakutanga" redu basa philosophy.We zvinopa yepamusoro zvinhu uye unhu mabasa edu vatengi zvitsva nezvitsaru.
OEM / Customizing / machine Services For Kusarudza:
1.Design/Manufacture aruminiyamu muforoma, itai muforoma muedzo
2.OEM ari aruminiyamu Profiles ukakumbira
3.we unogona kupa anodizing uye pamusoro kurapwa
4.we chipo yepamusoro machine kana kubudiswa basa panguva kutengeka mitengo, dzakadai sokuzvicheka, punching, tsika, drilling etc.
5.Any ruvara ruripo aruminiyamu zvinhu
6.Design/package ari aruminiyamu zvikamu maererano chikumbiro mutengi wacho
Izvi redu idzva nokuparira zvigadzirwa.
Kana uri kufarira producsts edu, unogona andibate nenzira pazasi kuonana nzira:
Musoro webasa: Sales Manager
We anopa OEM / customizing mabasa nokuda aruminiyamu Profiles, akadai kupisa singi, vachinyatsogona chikamu, Kwakaita aruminiyamu chubhu, non-maindasitiri mureza Profiles etc. Chokutanga, iwe uchava funga kuti ivhu, unogona kupa vanodhirowa kana yokunyora nokudhirowa kwatiri kuti ongororo. Uyewo unogona kutumira mharidzo chawakaita kuti tizive kwenyu chikumbiro. Chete iwe zvisimbiswe mharidzo kugadzira, tinogona mberi kupinda vakawanda kugadzirwa ukakumbira.